नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको बेलामा अहिले कसैले कुनै धारणा राख्यो भने उसलाई पारीको सिता खाएको होला भनेर आरोप लगाउने गरेको पनि पाइएको छ । कसैलाई छिमेकी मुलुक भारत वा
सरकारले जनता र देशका लागि केही पनि गर्दैन भनेर सर्वत्र गुनासो आइरहेको बेलामा धरहराले भने सरकार गम्भीर काममा लागेको पत्तो पाएको छ। सरकार त अहिले धमाधम १७ सय पृष्ठको पुस्तकको
सुन तस्करी काण्डमा एक जना प्रहरीका हाकिम आइतबार पक्राउ परेको देख्दा धरहरा वरपरका पनि धेरैले जिब्रो टोकेका छन् । यी त देखिएका भए । नदेखिएका प्रहरी हाकिमले अझ के के
अमेरिकामा अहिले ट्रम्प प्रशासनको गडबडीका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि अप्ठेरो परिरहेको गुनासो धरहरा वरपर त्यहाँ रहेकाहरूका आफन्तहरूले गरिरहेका छन्। तर, वासिङ्टनमा रहेको नेपाली दूतावास भने कहिले पनि सर्वसाधारणको सम्पर्कमा
अब खाममा हाल्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि अचेल के–के निर्णय गर्छ–गर्छ। त्यसैको बारेमा धरहरा वरपर पनि चर्चा हुने गरेको छ। गत बिहीबारको बैठकले चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई चिठी लेख्ने निर्णय गरेछ। जनता चुनावको तिथि
बेवकुफ महाशय ?
निकै अघि सिरहामा खुलेआम देश टुक्र्याउने भाषण दिएका सिके राउतलाई विहीबार धनुषाबाट प्रहरीले पक्राऊ गरेको धरहराबाट पनि देखियो । त्यो भन्दा अघि दोलखा पुगेका प्रधानमन्त्री पुकदाले बिखण्डनकारीलाई नछोड्ने बताएको पनि
खोई यस्ता पात्र ?
अहिले शहरमा काम गर्ने र गफ गर्नेको चर्चा भइरहेको देखिएको छ । त्यो मन्त्रिपरिषद्देखि विभिन्न सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्र सम्म छ । मन्त्रिपरिषद्का कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीकै कुरा पनि आउँछ ।
को राष्ट्रवादी ?
केपी ओली नेपालका अहिले चर्चित पात्रका रूपमा चिनिएका राष्ट्रवादी पात्र हुन्। धरहरा पनि यसमा सहमत छ। उनको अडानलाई लिएर पटक–पटक विवाद भइरहेको छ। कोही भन्छन्– ‘उनी राष्ट्रवादी नेता होइनन्। उनले
कोही छ ट्रम्प ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भटाभट आफ्ना चुनावी नारा पूरा गर्न थालेपछि अहिले नेपालमा पनि सनसनी मच्चिन थालेको पाइएको छ। यसो हुनुमा नेपालमा राजनीतिक दल र नेताहरूले चुनावी नारालाई नारामा मात्रै
‘…त्यही चाहिन्छ ’
धरहराले पनि संविधान संशोधनको लागि संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको देखेको छ । त्यो पास गराउनका लागि संसदमा दुई तिहाई मतको जरुरी हुन्छ । त्यति मत पुगेन भने त्यो असफल
आज माघ १५ गतेभित्रमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तयार पारेर दिइए र चुनाव घोषणा गरिए अर्को सालको माघ ७ गतेभित्र आफूले तीनवटा निर्वाचन गराउन सक्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको कुरा धरहराले पनि
नाङ्ले पसल र थ्रेसहोल्ड
अहिले दलहरूलाई थ्रेसहोल्ड कतिसम्म राख्ने भन्नेबारेमा चर्चा–परिचर्चा भइरहेको पाइएको छ। राजनीतिक दलको नाङ्ले पसल खोल्यो अनि आफ्ना पत्नी, साली, गर्लफ्रेन्ड तथा ब्वाइफ्रेन्डहरूलाई समानुपातिक कोटामार्फत् सांसद बनायो र जनताको करबापतको तलब–भत्ता
आगामी फागुन २ गतेबाट प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएपछि अब भावी आईजीपी को हुने भन्ने बहस चल्न थालेको छ। अहिले भावी आईजीपी को हुने भन्ने
प्रधानमन्त्री पुकदाले हिजो एकाएक पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेपछि लौ चमत्कार गर्ने मान्छे आज चुनावको तिथी पो घोषणा गर्न लागे कि के हो भनेर धरहरा वरपर धेरैले चर्चा गरे । तर,
वकिल साबका कथा
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा गडबड भयो र आफू बन्न पाइएन भनेर अहिले सरकारी वकिलहरु आन्दोलनमा उत्रिएकाले सर्वसाधारण जनता भने न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। इजलास नै नबसेको र आज हुने
नेपालका मान्छेले मात्रै खाली बाहिरको सिको गर्छन् भन्ने कुरा धरहराले पहिलादेखि नै सुन्दै आएको हो। तर, अहिले पश्चिमा मुलुकतिर धरहराले दूरबिन घुमाउँदा भने यो कुरा गलत भएको यसलाई लाग्न थालेको
एन्नो डोमिनी अर्थात् जुलियन र ग्रेगोरियन क्यालेण्डर अन्तर्गतको सम्बत एडी ६४का कुनै ६ दिन सम्म अहिलेको इटालीको राजधानी रोम जलेको कुरा इतिहासमा यो धरहराले पनि देख्ने गरेको छ । त्यतिबेला
खेल दुई तिहाइको
संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा आफ्नो मत पुर्याउनका लागि सत्ता पक्षका केही नेताहरूको दौडधूप देखेर धराहरालाई दिक्क लागेको छ। दिक्क नलागोस् पनि कसरी। यहाँ सत्ताको खेल शुरू भएको छ, जुन खेल
बृद्ध बालक, २८ र ८२
विद्यार्थी नेताहरुले स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिनका लागि उमेरको हद तोकिएको विषयलाई अहिले विरोध गरेको धरहराले पनि देखेको छ । कुरा के परेछ भने २८ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएकालाई चुनावमा
हाम्रो देशका मन्त्रीहरू कार्यक्रमहरूको उद्घाटन र भाषण गर्न जाने भने पछि हुरुक्कै हुन्छन्। उद्घाटन र भाषणको कार्यक्रम भनेपछि जहाँ पनि जान तयार हुन्छन्। कहिलेकाहीं मन्त्रीज्यूहरूले हसाउँने काम गर्नुहुन्छ। एउटा कार्यक्रम